Digniin Iyo Ammaan Isku Dhafan Oo Paul Ince Huwiyey Jose Mourinho
HomeWararka MaantaDigniin Iyo Ammaan Isku Dhafan Oo Paul Ince Huwiyey Jose Mourinho
Halyaygii Manchester United ee Paul Ince ayaa tababare Mourinho uga digay in aanu waligii noqon doonin ninkii Manchester United ku haboonaa haddii aanu koobab waa wayn kula guulaysan. Mourinho iyo kooxdiisa Red Devils ayaa kaalinta 6 aad kaga jira Premier Leaque-ga waxayna 14 kulan ka heleen 21 dhibcood. Laakiin Paul Ince ayaa jamaahiirta Man United u sheegay inay u samraan inta uu Mourinho la qabsanayo shaqada Old Traffrod isaga oo xusay in Sir Alex Ferguson laftiisa ay wakhti ku qaadatay.
Xidigii Man United ee Pual Ince oo eedaynta Mourinho loo soo jeediyo ka hadlaya iyo bal inay su’aashu ay sii socon doonto ayaa yidhi: “In la iswaydiiyo eedayntu way sii socon doontaa, Miyuu yahay ninkii ku haboonaa shaqadan?. Waligaa noqon maysid ninka Manchester United ku haboon ilaa inta aad koobab kula guulaysanayso”.
Pual Ince ayaa ku dooday in tababare Jose Mourinho uu taariikh ahaan yahay mid ugu fiican wuxuuna yidhi: “Laakiin Jose waxa uu leeyahay taariikhda aduunka ugu fiican, kaliya eeg koobabka uu kula soo guulaystay Porto, Chelsea, Inter Milan iyo Real Madrid. Saddex koob oo Premier Leaque-ga ah, laba koob oo Serie A ah, Laba koob oo Champions Leaque-ga ah, ma helaysid tababare kale oo awoodan u leh, waxaanad u baahan tahay mid ka mid ah si aad Man United hore ugu qaado”.
Intaa kadib Ince ayaa taageerayaasha Man United wax u sheegay: ” Laakiin taageerayaashu waa inay samraan. Sir Alex Ferguson waxay ku qaadatay lix sanadood in uu koob ku guulaysto isla markii uu qabtay xili ciyaareedkii 1985/86, waxay dadku sheegeen in aanu fiicnayn in ku filan. Markii uu aniga iyo Gary Pallister na keenay, waxay dadku ku qayliyeen in aanan fiicnayn, waxaanu si niyad jableh ugu dhamaysanay kaalinta 12 aad “.
Ince ayaa ka hadlay waxa laga fisho Manchester United wuxuuna yidhi: “Manchester United waxay la timid filasho wayn, waxaana sida cad waajib ah in aad horyaalka ku guulaysaynayso.”
Wejiyadii Wenger: Isbeddellada Ku Dhacay 20-kii Sannadood Ee Uu Joogay Arsenal Iyo Wixii Uu U Qabtay
Kroos Oo Laga Yaabo In Uu Ka Maqnaado Kulanka Juventus
10/05/2015 Abdiwahab Ahmed
Ancelotti Vs Semione: Jabka La Isla Maagan Yahay Kulanka Sabtida Iyo Ciyaartooyada